RBB/NBL मा वृति विकासका लागी उपलब्ध अवसरहरु - Education Fiber
Why A Saphala Ekadashi Is Important
Trust in god-Motivational Story
Functions of Nepal Rastra Bank
Education Model Questions
RBB/NBL मा वृति विकासका लागी उपलब्ध अवसरहरु
December 5, 2021 December 5, 2021 Education Fiber	0 Comments	RBB/NBL मा वृति विकासका लागी उपलब्ध अवसरहरु, RBB/NBL मा वृति विकासका लागी उपलब्ध अवसरहरु VVI, नेपाल बैंक लिमितटेड, विद्यमान समस्याहरु, समाधान/सुधारका लागी सुझावहरु
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक:- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको र नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो। RBB २३ जनवरी, १९६६ (२०२२ माघ १० BS) मा RBB ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको थियो। (RBB/NBL मा वृति विकासका लागी उपलब्ध अवसरहरु) RBB ले बैंक, बीमा कम्पनी, औद्योगिक व्यापार घराना, एयरलाइन्स, होटल र अन्य धेरै क्षेत्रहरु लगायत ग्राहकहरुलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दछ। RBB को २५७ शाखाहरू छन्।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको आरबीबी ऐन २०२१ अन्तर्गत गठन भएको यो बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) र कम्पनी ऐन (सीए) २०६३ अन्तर्गत चल्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंकलाई ‘क’ वर्गको व्यावसायिक देशको बैंक नेपालको अर्थतन्त्रको अङ्ग हो।
नेपाल बैंक लिमितटेड:-
१५ नोभेम्बर,१९३७ (कार्तिक ३०, १९९४) मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घाटन गर्नुभयो। यसले नेपालमा औपचारिक बैंकिङ युगको सुरुवात गरेको छ । त्यसबेलासम्म सबै मौद्रिक कारोवार निजी डिलर र ट्रेडिङ सेन्टरबाट हुने गरेको थियो ।
त्यो युगमा, औपचारिक बैंकिङको यो नयाँ अवधारणालाई धेरै कमले बुझेका थिए वा विश्वास गरेका थिए। बढ्दो इक्विटी शेयर सजिलो थिएन र निक्षेप परिचालन अझ गाह्रो थियो। बैंकले रु २,५००,००० को इक्विटी शेयर जारी गर्दा यो प्रष्ट भएको थियो, तर रु ८४२,००० मात्र उठाउन सफल भयो।
पहिलो वर्षको लागि कुल निक्षेप रु.१७,०२,०२५ थियो जहाँ हालको निक्षेप रु. १२,९८,८९८ निश्चित थियो लगभग रु. ३,८८,९६४ थियो र बचत रु.१४,१६३ थियो। पहिलो वर्षको अन्त्यमा कर्जा प्रवाह भएको र बक्यौता रु. १,९८५,००० थियो। सन् २००७ मा नेपाल बैंक लिमिटेडले रोहित घम्बोलेलाई प्रमुख बैंकर नियुक्त गरेको थियो ।
NBL को अवधारणा र स्थापना देखि नै सरकार र निजी क्षेत्र को संयुक्त उद्यम को रूप मा थियो। १०० अंकित मूल्यको २५०० इक्विटी शेयरहरू मध्ये, ६०% सरकारले सदस्यता लिएको थियो र सन्तुलित ४०% निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। बैंक सुरु हुँदा १० जना मात्र शेयरधनी थिए।
हाल उपलब्ध वृष्ति विकासका अवसरहरु निम्नानुसार रहेका छन:
कार्यक्षमताका अधारमा पदोन्नती हुने व्यवस्था ।
तोकिएको योगता र सेवा अवधि बढुवा हुने ।
तोकिएको पदमा खुला र आन्तरीक प्रतिस्पर्धा बाट बढुवा हुने व्यवस्था ।
तालिम, अध्ययन, अवलोकन भम्रणको अवसर रहेको ।
भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव गणना हुने ।
सेवाको सुरक्षा रहेको ।
विभिन्न किसिमका भत्ता, निवृत्तीभरण, उपदान, विमा र अन्य सुविधा रहेको ।
नातावाद, कृपावाद र क्षेत्रियवाद हावी ।
आफनो मान्छे, भनसुन, चाकडी, चप्लुसी, दान, दया र धम्कीमा आधारीत ।
वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मुल्यांकनको अभाव र वस्तुनिष्ठ नहुनु ।
ADBL, RBB र NBL मा सेवा शतमा बारम्बार परिवर्तन हुनु ।
मनव संसाधन विकासमा कम चासो हुनु ।
सेवा, समुहपिच्छे फरक–फरक अवसर रहनु ।
कर्मचारीको तलव सुविधा पर्याप्त नहुनु ।
अध्ययन, तालिम, अवलोकनको अवसर असमान हुनु
व्यक्तिगत सामीप्यताको प्रभाव बढी देखिनु ।
चुनौतीपुर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने अधार नहुनु ।
ऐन कानुनहरु निम्नअधारमा परिवतन भैरहनु इत्यादी ।
समाधान/सुधारका लागी सुझावहरु:
शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउने।
जीवनयापन गर्न पुग्ने तलव सुविधा प्रदान गर्ने ।
बढुवाको लागी दरवन्दि अनुपात मिलाउने ।
सरुवाका पर्वधानलाई पाल्ना गर्ने/गराउने ।
तालिमको प्रभावकारी व्यवस्थf गर्ने ।
अधिकारको विकेन्द्रिरणमा जोड दिने ।
प्रभावकारी वृति विकास योजना ल्याने ।
कार्यविवरण वनाइ कार्य सम्पादन मुल्याकंनलाई वस्तुगत बनाउने ।
सवै सेवामा वृति विकासको अवसर समान बनाउनेपर्ने ।
वृति विकासलाइ प्रभावकारी फराकिलो बनाउने ।
यसरी बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकासमा अग्रमी स्थान ओगटने तथा महत्वपुर्ण योगदान पुर्‍याउने बैंक ADBL, RBB र NBL भएको नाताले पनि कमदार/कर्मचारीहरुको वृति विकासको लागी नातावाद, कृपावाद, चाकडी, चप्लुसीको खेल भन्दा बाहिर निस्किएर माथी उल्लेखित सुधारहरु कार्यान्वयनमा ल्याइ कर्मचारीहरुको देखा र वृतिविकासको लागी छुट्टै बजेटको तर्जुमा गर्न सके नेपालको सरकारी बैंकमा वृति विकास मौलाउने देखिन्छ ।
यो पनि पढनुहोस:-
निक्षेपका प्रकार एवं संकलन तथा परिचालन
कर्जा लगानी केही सिद्धान्तहरुको ब्याख्या
RBB को परिक्षामा सोधिने महवपूर्ण Short Question को जानकारी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्बन्धी जानकारी
राष्ट्रीय बाणिज्य बैकको लागी चाहिने आवश्यक जानकारी
नेपालको बैकिङ्ग क्षेत्रका वर्तमान चुनौती र सम्भवनाहरु
Please click this link for more educational information
← निक्षेपका प्रकार एवं संकलन तथा परिचालन
ABBS र Mobile Banking को बारेमा जानकारी →
Some diseases cured by Patharchatta (Coleus Barbatus)
August 14, 2021 August 14, 2021 admin	3
Find happiness in what you have-Motivational Story
December 4, 2021 December 4, 2021 Education Fiber	0
November 26, 2021 November 26, 2021 Education Fiber	1
ABBS र Mobile Banking को बारेमा जानकारी
Copyright © 2022 Education Fiber. All rights reserved.